Baaq ku saabsan Isku Dayga Boobka Doorashada Dalka - Awdinle Online
Baaq ku saabsan Isku Dayga Boobka Doorashada Dalka
Taageereyaasha Murashax Madaxweyne Jabriil Ibraahin Cabdulle
Sida ku cad dastuurka KMG ah ee dalka, doorashadu waxey ka mid tahay xuquuqaha asaasiga ah ee uu muwaadinka Soomaaliyeed leeyahay. Sidoo kale doorashadu waxey hormuud u tahay arrimaha masiiriga ah ee isku haya midnimada shacabka, marka umuuraha quseeya doorashada ah waa lagu ma xadgudbaan, lama taabtaan ah oo u baahan in si gooni ah loo xurmeeyo. Dowladdu looma qaadan oo waa xaaraan iney isku daydo boob iyo xoog iney isku doorato, haddey sida eey wax ku waddo ku sii socdaanna waxa inagu soo fool leh waa hirar qatar ah oo haddaan si xilkasnimo ah loo fakarin keeni kara iney dalka u horseedaan qalalaaso iyo isqabqabsi hor leh.
Micnaha iyo nuxurka madaxnimaduna maaha inaad dalkaaga rajo tirto oo aad geeddiga ku furto meel aan munaasib aheyn. Waxa madaxweyne Formaajo loo igmaday waxey aheyd in afar sanno ka dib uu talada gacanta dadka ku soo celiyo oo uu u madaxbanneeyo masiirkooda sida eey uga arrinsan lahaayeen. Marka waxi habeen hore ka dhacay madaxtooyada dalka waxaan u aragnaa qar iska tuurnimo siyaasadeed oo boogo halistooda leh ku reebaya mustaqbalka siyaasaddeed ee madaxda hadda arrimineysa. Sida looga bartay taageereyaasha murashax Jabriil oo ah in nabadda iyo wadajirka ummadda laga hormariyo wax walbaa oo kale, waxaan ku talineynaa in la iska ilaaliyo ka shaqeynta danaha shaqsiga ah isla markaana loo guntado sidii dalkaan eey uga dhici laheyd doorasho hufan oo xalaal ah sannadka 2021.
Marka laga soo tago Madaxweyne Formaajo oo murashax shaar isaga la eg inoo tosho rabo ah, waxaan uga digeynaa Raiisul wasaaraha dalka Mudane Rooble inuusan ku dakanoobin waxuusan dheefsan doonin, iskuna wasaqeyn siyaasad xaaraan ah oo ku saleysan macaash shaqsi ah iyo in la dhantaalo dareenka shacabkan Soomaaliyeed ee dowladnimada u ooman.
Ugu dambeyn waxaan ka digeynaa in dalkaan loo horseedu muranno iyo isqabqabsi ka dhasho ka shaqeynta doorasho aan loo dhammeyn oo xaaraan ah, waayo dalkeena waxaa inooga
jirto lixa jeclo, jaceylka aan u qabno qarankeena iyo waddaniyadda qalbigeena ku abuuran ayaa ina faraaya in aanan ku fiirsan dalkeena halka lagu wado.
Ma lihin dal aan aheyn Soomaaliya.
Taageereyaasha Murashax Madaxweyne
Jabriil Ibraahin Cabdulle.
Previous articleGuddiga doorashooyinka Musharixiinta oo War soo saaray
Next articleMidowga Musharixiinta oo War culus soo saaray kuna dhawaaqay…